सम्झने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा।।। » Purbihotline
गुलाफको फूललाई जे नाम दिए पनि त्यसको सौन्दर्यमा कुनै फरक नपरेझैं नारायण गोपालका अजम्बरी गीत जसले, जहाँ र जसरी सम्झे पनि ती गीतका ओजमा कुनै फरक पर्दैन नै । त्यसैले नारायण गोपालका गीत गडेका आफ्नो यात्रा सम्झना सुनाउँदै छुस् सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् १
कुपन्डोलबाट हामी सहिद शुक्रराज जोशी शास्त्रीको शालिकलाई दायाँ पार्दै अघि बढ्यौँ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस कटेपछि पाटनढोका नपुग्दै समुराइ रेस्टुराँमा छि(यौँ ।
पस्नासाथै सुखद अनुभूति भयो, एउटा सङ्गीत स्रष्टाको कुरा गर्दै गएका थियौँ हामी, रेस्टुराँको भित्तामा पाँच जना सङ्गीत स्रष्टाको तस्बिर सजाइएको रहेछ १
मेरो अर्का साथी छन्, दुर्गामान सिंह डङ्गोल । ब्रह्मटोलका ज्यापुका छोरा दुर्गामान कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०मा काम गर्छन् । म ताहाचलकी ज्यापु आमाको घरमा डेरा बस्दादेखिको साथी । कुनै तेस्रो साथीसँग परिचय गराउनु पर्दा म भन्थेँ पनि, दुर्गामानजी ब्रह्म टोलका ज्यापु, म ज्यापुको घरमा बस्ने ब्राह्मण १’
दशकौंदेखिको तिनै साथी मलाई भेट्न रातोपाटी कार्यालयमा आए । हामी खाजा खान त्यही समुराई रेस्टुराँमा गयौँ । अर्को सुखद संयोग, रेस्टुराँ मालिक त दुर्गामानको टोलिया दाइ रहेछन् १
नारायण गोपाल, नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका मेरा रोज्जा स्रष्टा । उनलाई मैले भेटेको ४२ वर्ष र उनी बितेको २७ वर्ष भयो । तर, ‘नम्बरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन’ ठानेर नारायण गोपालबारे मैले कहिल्यै, कहीँकतै, केही लेखेको छैन, लेखिनँ । केवल आफ्नो हृदयमा स्नेहसाथ सजाएको छु । तर, मेरो मनमा मात्र रहेको उनीप्रतिको स्नेह सम्मान कसले देख्छ र १रु सत्यम् १
मेरा लागि ‘घाँसी’ बने राजेन्द्रमान श्रेष्ठ । त्यसैले नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका अद्वितीय स्रष्टा नारायण गोपालप्रति अठ्ठाइसौं स्मृति दिवसमा उनकै गीतमा थोरै फेरबदल गरेर शब्द सुमन समर्पण गर्दैछुस्
कात्तिकको एउटा बिहान । मिर्मिरेमै काका ९कृष्ण सिम्खडा० र म पातलो हुस्सु चिर्दै नयाँबजारबाट क्षेत्रपाटी, असन, रत्नपार्क भएर बसपार्क पुग्यौँ । जानु थियो, धादिङ सदरमुकाम पारिपट्टिको गाउँ साङकोसमा, ठुल्दिदीसँग भाइटीका लगाउन ।
त्यसैले आदमघाटसम्मको टिकट काटेर पोखरा जाने बसमा चढ्यौँ हामी । निर्धारित समयमा छुटेन बस । हामीले गुनासो गर्यौं । दुई सिटअगाडिको एक यात्रुले हामीतिर फर्केर हाँस्दै भने, ‘यो बस अझै आधा घण्टा छुट्दैन हजुर १’ बिहानै कालो चस्मा लगाएका थिए, मेरै उमेरका ती बोलक्कड यात्रीले । बसमा कसैले केही कुरा गर्यो भने उनी तत्कालै प्रतिक्रिया जनाइ हाल्थे ।
उनले सोधे, ‘कहाँ जाने हो तपाईंहरू ?
‘साङकोस, अनि तपाईं नि ?
हामीले औपचारिक परिचय ग(यौं । कृष्ण रिमाल रहेछ उनको नाम । मैले ठट्टा गर्दै भने, ‘तपाईं त काकाको मित पो हुनुहुँदो रहेछ १’
वाक्पटु उनले भनिहाले ‘तपाईंको नाम कृष्ण भएको भए मित लगाउन नि हुन्थ्यो, काकासँग त के मित लगाइ भयो र १’
सानो पसलमा झुन्डिएको सानै रेडियोमा भूपी शेरचनको शब्द, नारायण गोपालको स्वरमा घन्किरहेको थियोस्
बल्झेछ क्यारे सुनको काँडा कलिलो खुट्टामा।।।’
कृष्ण रिमालको सल्लाह नमानेको भए न त्यति मीठो परिकार खान पाइन्थ्यो, न त मिठासपूर्ण यो गीत सुन्ने संयोग नै जुर्थ्यो १ क्याबात कृष्ण रिमाल १
पृथ्वी गोलो छ, कहीँ न कहीँ भेट हुन्छ भनिन्छ नि, त्यस्तै भयो । २०४० सालमा हामी दार्खाबाट सिमरा बसाइँ स(यौँ । कृष्णजी पनि त्यहीँ बसाइँ सरिसकेका रहेछन् । हाम्रो भेट भयो ।
केही मिनेटको दूरीमा हाम्रो घर थियो । कृष्णजीका पिता, मेरा ससुरालीका एकजना ससुरा बाका मितसमेत हुनुहुँदो रहेछ । कृष्णजीसँगको मित्रता साह्रै घनिष्ट भयो । कृष्णजी हाम्रो परिवारको सदस्य सरह भए । म धेरैजसो काठमाडौँ नै बस्थेँ, सिमरा पुगेको बेला कृष्णजी प्रायस् मसँग नै हुन्थे ।
रोग पत्ता लाग्यो, टीबी भएको रहेछ । कृष्णजीको सफल उपचार भयो । तर, त्यो सरुवा रोग सङ्क्रमण हुनबाट म बँचिनछु १ मेरो छातीमा बल्झेछ क्षयदार किटाणु । केही छैन, उपचारपछि मलाई पनि काँडा झिकेजस्तै भइहाल्यो ।
सुखको मात्र साथी के साथी, मूल्य तिरिएको मित्रताकै हुन्छ महत्ता । शिवम् १
पचघरे पुगेर चिया खाँदै थियौँ । रेडियो नेपालबाट बिहान ७ बजेको समाचार आयो । वीर अस्पतालमा उपचाररत ५१ वर्षे नारायण गोपालको अघिल्लो रात ९२०४७ मङ्सिर १९ गते राति ९ बजे० निधन भएछ, उफ् १ नेपाली साङ्गीतिक आकाशका ध्रुवतारा देहिक रुपमा अस्ताएछ ११
मैले झल्झली सम्झिएँ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको रचना र नारायण गोपालको स्वरको गीतस्
सृष्टिको फूल रचेर त्यस्तो कसरी लतारिस्।।।’
गोपालजी र म खिन्न मनसहित बाटो लाग्यौँ । पचघरे र सेउले बजारबीचको भन्ज्याङको देउरालीमा नारायण गोपालको नाममा पातीको मुन्टा चुडेर चढायौँ । त्यतिखेर रेडियो नेपालबाट पनि नारायण गोपालकै गीत प्रसारण भइरहेको पो थियो कि रुस्
कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यौँ जस्तो लाग्छ।।।’
गोपालजीलाई हाम्रो गाउँघर मन प(यो । हामी ३,४ दिन त्यहीँ बसेर नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका लागि केही ‘स्टोरी’ तयार पा(यौँ । थपमा, गोपालजीले एक रोचक पात्र, मेरो भानिजबा टङ्कप्रसाद ढकालमाथि लेखेको ‘स्टोरी’पछि प्रतिपक्ष साप्ताहिकमा छापियो ।
नभन्दै, पन्चसिंह ठूलोबा र माइलाबाको अगुवाइमा त्यसै साल बाँझो बारीमा वृक्षरोपण भएछ । ‘मेरो प्यारो दार्खा’को पहिरोले दाह्रेको एउटा बन्जर भूभाग अहिले ‘।।।सुन्दर हरियालीमा।।।’ परिणत भएको छ । अहा सुन्दरम् १
ए, मलाई ‘शुभकामना सधैभरि लाइ’ दिने मेरा रोज्जा गायक १ दार्खाको त्यो हरियाली सबै सबै तिमीलाई है ११
‘किन आ’को रु’ पावरवाला बाक्लो चस्मा लगाएका र बाक्लै ओठ भएका नारायण गोपालले सोधे ।
हामीलाई फुच्चे नै देखेर हो कि रु उनी नियालेर हेर्दै थिए, मैले अटोबुक टेबलमा तेर्साइदिएँ ।
‘टिमेरुनि मेरो गीट सुन्छ रु’ खाँटी नेवार लवजमा सोधे । नेपाली गीत एकदमै सहीशुद्ध गाउने नारायण गोपालको नेपाली बोलीचालीमा भने उच्चारण शुद्ध रहेनछ १
दुई सिम्खडा ठिटा खडा नै थियौँ, उनले टेबलमाथिको होल्डरबाट दुईमध्ये एउटा कलम झिके र खरर्र लेखेस्
अनि दस्तखत गरेस्
र, मिति लेखेस्
हामीले लामो सास फे(यौँ, हाम्रो आकाङ्क्षा सहजै पूरा भएको थियो । आभार प्रकट गर्दै फर्कियौँ हामी ।
र, आज तिनै महान् स्रष्टा नारायण गोपालको अठ्ठाइसौं स्मृति दिवस । मेरो श्रद्धासम्झना सधैँभरिलाई १
किन पनि भने, उनकै स्वरको यो गीत मैले कम्तीमै हजारबार सुनेको छुस्
‘यो सम्झने मन छ, म बिर्सुं कसोरीरु।।।’
← ट्याक्टर पल्टिँदा एक जनाको मृत्यु
सर्वसाधारणलाई पनि पेन्सन प्रस्ताव →
युवाको नेतृत्व दिपशिखा नै हुनु पर्ने
May 7, 2019 पूर्वी हटलाइन 0